Taariikhda My Butros » Romance, A Dareenka ama wax aan sameyn?
Last updated: Oct. 21 2020 | 3 min akhri
Haddii aad fiiriso erayga 'hindiga' ee qaamuuska waxaa ku qoran sida ay labada magac iyo fal ah! Sidaas waxa ay dhab ahaan waa hindiga?
Waxaan ku soo laabtay waqti xusuusan karaa marka aan si dhab ahaantii halgan ee xiriirka jaceyl isticmaalo, Waxaan la ex gaar ahaa oo aan isku dayayeen in ay 'badbaadin' noo xiriirka u dhimanayaan, sidaas darteed waxaan go'aansaday in aan leenahay lahaa a 'habeenkii taariikhda' todobaad kasta. Ma jiraan wax ka qaldan fikrad in uu yahay, dhab ahaantii isagoo ah 'habeenkii taariikhda' todobaadle ah waa wax aan si firfircoon ugu dhiirigaliyaan macaamiisha aan u sameeyo, si kastaba ha ahaatee waxa aan xusuusan ku saabsan xiriirka gaarka ah waa in ay ma laha inta badan taariikhaha waxaan ku tageen, romantic marnaba yimid dib! Dareenka Our is beddeleen. Oo sidaas daraaddeed waxay gabi ahaanba kala duwan yihiin ma waxa si abid inta jeer ee aan ku fadhiistay miiska ka soo kasta oo kale oo ay goob ka taataabtay dhigay, waxaa jiray weli ma hindiga noo xaaladiisa la eego.
Sidaas, Taasi waxay muujinaysaa, in aad inaysan ku qasbi karin hindiga.
Waxa ay muujinaysaa in aad u wada qaban karaan wax, taas oo dad badan u tilmaami lahaa in uu yahay 'taataabtay', Si kastaba ha ahaatee haddii dareenkaaga ka dambeeya falalka ma yihiin waxaa markaa runtii ma dareemaan aad u taataabtay ma at dhan, Dhab ahaantii ay dareemi karaan in la saarin. Weligaa la fadhiisteen qof aad shukaansi badan cunto bixi oo kaliya ma xaq u dareemaan? Wadahadalka ayaa waxaa sidri iyo habacsanaanta, ama laga yaabee waxaa jiray xiisad iyo dareen xun hawada. Marka ay sidaas tahay waxaa uma aragto sida taataabtay goob ama hawlaha aad wax u qabanayso, waxa kaliya ma simanyihiin aan ilaa 'hindiga'. On flipside u Waxaan sidoo kale qabaa karaa of jeer markii aan samaynay waxyaalo qof kaliya ma ahaayeen jaceyl at dhan, sida socodka iyada oo dhoobada Wellies noo roobka, iyo weli waxay weli dareemay taataabtay, sababta oo ah dareenka oo xiriir aan la wadaagto qof in.
Sidee ku saabsan kuwa lamaane oo aad wada arkaan in si cad lahaa muran - sida taataabtay ay fiidkii noqon doonaa? Laga yaabaa in la badbaadin karo, haddii mid iyaga ka mid ah oo wax ka taataabtay in qarxay barafka oo mar kale ayaa dhalisey in dareenka jacaylka. Dhab ahaantii ma waxay dhihi suurto-gal galmo in uu noqon karaa mid kulul? (Dumarka macaamiisha waxaan ku talineynaa socda ee xiriirka halkaas oo ay u jecel yihiin iyo kalgacalka ka kooban yahay, halkii kulul iyo kuwa qabow).
Sida qof dumar ah oo aan tusi kara xaqiiqda ah in markii nin aado waddo dheer of wax ka taataabtay uu qof dumar waxay si aad ah la qiimaynaayo, xataa haddii laga yaabaa in dumar ah ayaa sheegay in kaliya shukaansi ninkii ku yidhi, iyo iyada oo aan isaga ku saabsan weli hubay, Guud ahaan waxaan dumarka mahad waji ka taataabtay. Si kastaba ha ahaatee xitaa in seenyada ah tan ugu sareysa, tilmaam ka taataabtay rabin noqon kartaa mid dhibaato aad u, sidaa darteed waa qatka?
Maxay hindiga macnaheedu in aad? Ma u eg tahay in xaaladaha oo dhan iyo haddii aan sababta aan? Waxa loo isticmaali karaa si aad ugu bogsiisid iyo dayactiro xiriir ama in u guban jacaylka iyo kalgacalka? Kuwani waa su'aalaha xiiso leh si aad u weydiiso.
Waa hubaal muran ah labada dhinac. Shaqsi ahaan waxaan u soo jeedin in hindiga waa dareen, taasoo lagu soo celin karaa on by ficil ama taxane ah oo falalka. Tusaale ahaan, haddii ninkayga qorshaynayso taariikh fiican inoo, oo la geeyo dadaalka loogu jiro in igu soo qaato, ama uu kor u muujinaysa guriga la xidhmo weyn oo ubax ii, taas waxay keenaysaa doonaa jawaab ka taataabtay gudaha igu of. Maxaan dareemi doonaa hab gaar ah oo aan isaga kula wadaagi doonaa in. Waxaan mahad doonaa wixii uu sameeyey oo igu socodsiin doonaa dareemaan wanaag iyo dhoola. Tani, markeeda, dhigi doonaa isaga wanaag dareento.
Si kastaba ha ahaatee waxa run ahaantii aad ii xiiso waa in aan haweenku ku leeyihiin awoodda lagu abuurayo dareenka jaceyl nafteena dhan ayaa dhexdayada! Maxaan ula jeednaa waxa weeye in marka naag barto in uu kaliya ahaado, in iyada oo jilicsan, tamarta dhedig, ayay dareemi karaan taataabtay, xataa haddii uu jiro nin la joogo ma jiro. Dareenkaas waxaa lagu gaari karaa iyadoo la isticmaalayo qubays kulul, shumacyo, la massage udugga ah, xirashada dharka quruxda badan iyo siyaabo badan oo kale. Sidaas tani dadka dhiibida? Ha, cadeenayaa in heshiis laba, Waxaan u soo jeedin in marka qof dumar ah oo aad u jilciso kartaa iyo waayo-aragnimo dareen taataabtay, marka dareento in uu ruuxaasi ku darayaa in dareen tan ka furmay meel bannaan oo iyada u mahad badane iyada nin.
Haddii aad og tahay hab si shukaansi waxaad ogaan doontaan inaan aaminsanahay rag ah iyo dhedig doorka tamarta jirta xidhiidh, sidaa naag dhedig, anigu ma soo jeedin lahaa 'qabataa' wax ka taataabtay ee iyada nin, Si kastaba ha ahaatee gelayno meel bannaan ah oo ka taataabtay of 'dareen' iyo 'lagu', ka dibna la wadaago in iyada iyo nin uu noqon karaa mid u qurux badan. Waxaa sidoo kale ku baaqaysaa in uu u baahan inay noqdaan rag ah iyo raalli uu qof dumar adigoo samaynaya waxyaabaha iyada in ay uga faraxsan. Haddii aad tahay qof dumar ah oo aad jeclaan lahayd hindiga dheeraad ah in aad xiriir Waxaan kula talin this isku dayaya. Oo haddii aad tahay nin oo aad doonayso in aad ku guulaysan 'qof dumar ah oo aad shukaansi, ama dib u soo celin dareenkuba in xiriirka aad haatan ku sugan yihiin, Waxaan soo jeedinaynaa in 'qabataa' wax ka taataabtay iyada u, ruuxa dhabta ah ee romantic-ka danbeeyaan falalka ka!
5 Fikradaha inay soo baxaan Romance